Xinhua Myanmar - ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း Sinopharm COVID-19 ကာကွယ်ဆေး တစ်ဘီလီယံ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်မည်
၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း Sinopharm COVID-19 ကာကွယ်ဆေး တစ်ဘီလီယံ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်မည်
တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့၌ မတ် ၃ ရက်တွင် ဗီဒီယိုရုပ်သံမှတစ်ဆင့်ပြုလုပ်သော တရုတ်ပြည်သူ့နိုင်ငံရေးအတိုင်ပင်ခံညီလာခံ(CPPCC)၏ ၁၃ ကြိမ်မြောက် အမျိုးသားကော်မတီ စတုတ္တအစည်းအဝေး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် သတင်းသမားများတက်ရောက်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ) CHINA
ပေကျင်း၊မတ် ၄ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံက နိုင်ငံပိုင်ဆေးဝါးလုပ်ငန်းဖြစ်သော Sionpharm မှ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေး အမြောက်အမြားထုတ်လုပ်နေပြီး ယခုနှစ်အတွင်း ဆေးအလုံးရေ တစ်ဘီလံယံကျော် ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ရန် မျှော်လင့်ထားကြောင်း Sinopharm ကုမ္ပဏီ အုပ်စု ဥက္ကဌ Yu Qingming က မတ် ၃ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ထုတ်လုပ်မှုပမာဏကို တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် နှစ်စဉ် ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းသည် အနာဂတ်တွင် တစ်နှစ် အလုံးရေ ၃ ဘီလီယံထိ ရောက်ရှိရန် ရည်မှန်းထားကြောင်း ထိပ်တန်းဥပဒေပြုရေး အမျိုးသားပြည်သူ့ကွန်ဂရက်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ Yu ကဆိုသည်။
ထို့ပြင် Sinopharm သည် ပြန်လည်ပေါင်းစပ်သော ပရိုတိန်းကာကွယ်ဆေးများထုတ်လုပ်ရာတွင် အရေးပါသော တိုးတက်မှုကို လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း နှင့် မကြာခင် လူဖြင့် စမ်းသပ်မှုအဆင့်သို့ တက်လှမ်းနိုင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း Yu ကဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
လက်ရှိတွင် တရုတ်နိုင်ငံသည် ဈေးကွက် အခြေအနေအရ ၎င်းတို့၏ ပြည်တွင်းထုတ် လေးခုမြောက် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကို ခွင့်ပြုချက်ပေးထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းအထိ တရုတ်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အလုံးပေါင်း ၅၂ သန်းကျော် ထိုးနှံပေးထားပြီးဖြစ်ကြောင်း နှင့် တရုတ်နိုင်ငံက နိုင်ငံပေါင်း ၆၉ နိုင်ငံ နှင့်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း နှစ်ခုသို့ ကာကွယ်ဆေးများ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြောင်း တရုတ်ပြည်သူ့နိုင်ငံရေးအတိုင်ပင်ခံညီလာခံ(CPPCC)၏ ၁၃ ကြိမ်မြောက် အမျိုးသားကော်မတီ စတုတ္တအစည်းအဝေးမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Guo Weimin က မတ်လ ၃ ရက်တွင် ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
Output of Sinopharm COVID-19 vaccines to top 1 bln doses in 2021
BEIJING, March3(Xinhua) -- China has put the inactivated COVID-19 vaccines developed by state-owned pharmaceutical firm Sinopharm into mass production and this year's output is expected to surpass 1 billion doses, Yu Qingming, chairman of Sinopharm Group, said on Wednesday.
By continuing to increase production capacity, the annual output of the vaccines is expected to reach3billion doses in the future, said Yu,adeputy to the National People's Congress, the top legislature.
Sinopharm has also made significant progress in the development of recombinant protein vaccines and will soon start clinical trials, according to Yu.
So far, China has granted conditional market approval to four self-developed COVID-19 vaccines.
More than 52 million doses of COVID-19 vaccines had been administered across China as of the end of February, and the country had provided vaccine assistance to 69 countries and two international organizations, Guo Weimin, spokesperson for the fourth session of the 13th National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference, toldapress conference Wednesday. Enditem
Photo caption- Journalists attendapress conference of the fourth session of the 13th National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC) through video link in Beijing, capital of China, March 3, 2021.
Previous Article တရုတ်နိုင်ငံက ကာကွယ်ဆေးကို ဘေးကင်းလုံခြုံမှု ၊ အာနိသင်ရှိမှု ပထမဦးစားပေးကာ အစဉ်အမြဲ ထုတ်လုပ်ဟုဆို
Next Article တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့တွင် လူဦးရေ ၅ သန်းကျော် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးဖြစ်